”Soo Guryo Noqoshada M/weyne Rayaale Iyo Natiijadii Socdaalkiisa Kuwait” Shir Jaraa’id « SAWNEWS NETWORK
« Mashruuca ugu najaxa badan ee Awdal “Cusbitaalka Fistuula”
Faallo: Daan-daansiga Ereteria, Dulqaadka Somaliland, Iyo Sooyaalka Tariikheed ee geeska Afrika »
”Soo Guryo Noqoshada M/weyne Rayaale Iyo Natiijadii Socdaalkiisa Kuwait” Shir Jaraa’id
Posted by Sawnews.tk on June 23, 2009
Hargaysa (Sawnews) :- Madaxweynaha Somaliland Md. Daahir Rayaale Kaahin, oo shalay ka soo degay madaarka Magaalada xeebta ku taala ee Berbera ka dib markii uu ka soo laabtay socdaal qaatay muddo 7 cisho ah oo uu ku tagay Dalka Kuwait, oo uu martiqaad ka helay.
Madaxweyne Rayaale oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Berbera ka hor intii aanu ku soo guryo noqon magaalada Hargeysa, ayaa ka waramay natiijadii socdaalkiisa isla markaana ka hadlay khilaafaadka taagan.
Madaxweynaha Somaliland oo tafaasiil ka bixinayay socdaalkiisii wuxuu yidhi “Dalka Kuweyt madaxda aan kala kulmay way ka wada sareeyeen meelaha kale wixii aan kala kulmay, Amiirka Kuweyt waan la kulmay, Wasiirkii Arrimaha Dibada waan la kulmay iyo Amiirka leh dhaxal halkaasi. Waxa ugu muhiimsan ee aan kala hadlay wuxuu ahaa wixii dan u noqon lahaa ummadan dhismaha aasaasiga ah inay inaga caawiyaan, xaga waddooyinka iyo waxyaabaha kale ee mujtamaca wax u taraya sida biyaha iyo caafimaadka oo aan u arkayay kuwa ugu mihiimsan, run ahaantii jawaab fiican bay i siiyeen waxaanay balan qaadeen oo ay wixii caawimo ahna inoo soo marinayaan hay’adooda deeqaha qaabilsan, oo berigii horeba Kuweyt fund mashaariicdii hore ee wadooyinkii la dhisay xilligii Soomaaliya qayb weyn ka bixisay”.
Madaxweynaha Somaliland wuxuu sheegay inuu hoggaamiyeyaasha dalka Kuweyt ku dhiirigeliyey inay maalgashadaan Somaliland, waxaanu yidhi “Inshallaahu waxaan rajaynaynaa inay inoo yimaadaan aniguna waxaan ku dhiirigeliyey inay dalka yimaadaan maadaama ay Kuweyt tahay dalka ugu balaadhan ee wax maalgashada dalalka Carabta. Wax fiicana waan kala kulmay, rag meesha inala joogay oo ay qiimeynayeena way jireen muqaabilada la ii sameeyey waxay ahayd mid aanan hore uga baran.”
Madaxweyne Rayaale wuxuu intaas ku daray, “Aniguna waxan uga faa’iidaystay waxyaabaha ugu muhiimsan waddooyinka, biyaha, caafimaadka iyo waxyaabaha aasaasiga ah, cisbitaal ay iyagu gacanta ku hayaan ayay ka dhisayaan Degmada Sheekh, kulankaasi wuxuu ahaa mid taariikhiya waxaanan rajaynayaa in ay si dhakhso ah u yimaadaan oo ay qiimeeyaan. Intaasi ka dib weriyeyaashii shirkaasi jaraa’id ka qayb galay ayaa waxay weydiiyeen su’aalo u dhacay sidan:-
S: Madaxweyne, xidhiidhka Somaliland iyo wadamada Carabta waxaad moodaa inuu markii hore xadidnaa, markaa muxuu ka bedeli karaa xidhiidhka ay Somaliland la leedahay wadamada Khaliijka?
J: Run ahaantii inagu albaab aynu iska xidhnay ma jiro, laakiin albaabkii inoo furmaba inaan galo waajib bay nagu tahay. Anigu waxaan is leeyahay furre aan noqdo.
Berigii Imaaraadka Carabta waxaan la kulmay uun Sh. Xamdaan, oo isagana aad og-tihiin waxtarkiisa riiga biyaha inoo qoday, Bisha Cas ee dhawaan qaliinka indhaha fuliyey, imika wuxuu inoo soo dirayaa kooxo wadnaha qala. Kalyaha mishiinadii lagu sifeynayay ayay Hargeysa keeneen, waxaan u arkaa inay Carabtu ka waxtar badnaan doonto kuwa kale.
S: Madaxweyne aqoonsi sidii aynu u heli lahayn ma kala hadashay madaxda Kuweyt? J: Horta aqoonsiga ha inoo dambeeyo, wax badan baa inooga horeeya haddii aynu dhaqaale helno aqoonsiga waa la inoo imanayaa.
Haddii dhulkiina khayraad ka soo baxo oo shidaalkii aynu la soo baxno oo maalgelin lagu sameeyo waa la ina aqoonsanayaa, aqoonsigana waynu baahinaynaa.
S: Rajo ma ka qabtaa in doorashadu qabsoonto 27-ka Sebtambar? J: Inshaallaahu inay 27-ka Sebtambar dhacdo ayaan anigu aaminsan yahay?
S: Madaxweyne, Xisbiyada Qaranku wali islama ay meel dhigid wax heshiis ah siddee ayaad arrintaasi u aragtaa?
J: Horta, dalku sharci buu leeyahay xisbiyo tartamayaa waxba kuma heshiin karaan, dalka saddex doorasho ayaa hore uga dhacay shuruuc dalka u taala ayaa loo raacay, tanna shuruucda ayaa loo raaci doontaa.
S: Madaxweyne, sidee ayaad u aragtay labadii xubnood ee Komishanka ee la doonayay in la beddelo ee aad u gudbisay Golaha Wakiilada?
J: Horta anigu waxba ma aan gudbin ee ku xigeenkayga ayaa gudbiyay waynu eegi doonaa siday u soo celiyeen haddii ay masalo sharciya tahay waan eegi doonaa.
Madaxweynaha Somaliland Md. Daahir Rayaale Kaahin, oo shalay ka soo degay madaarka Magaalada xeebta ku taala ee Berbera ka dib markii uu ka soo laabtay socdaal qaatay muddo 7 cisho ah oo uu ku tagay Dalka Kuwait, oo uu martiqaad ka helay.
Madaxweynaha Somaliland oo tafaasiil ka bixinayay socdaalkiisii wuxuu yidhi “Dalka Kuweyt madaxda aan kala kulmay way ka wada sareeyeen meelaha kale wixii aan kala kulmay, Amiirka Kuweyt waan la kulmay, Wasiirkii Arrimaha Dibada waan la kulmay iyo Amiirka leh dhaxal halkaasi. Waxa ugu muhiimsan ee aan kala hadlay wuxuu ahaa wixii dan u noqon lahaa ummadan dhismaha aasaasiga ah inay inaga caawiyaan, xaga waddooyinka iyo waxyaabaha kale ee mujtamaca wax u taraya sida biyaha iyo caafimaadka oo aan u arkayay kuwa ugu mihiimsan, run ahaantii jawaab fiican bay i siiyeen waxaanay balan qaadeen oo ay wixii caawimo ahna inoo soo marinayaan hay’adooda deeqaha qaabilsan, oo berigii horeba Kuweyt fund mashaariicdii hore ee wadooyinkii la dhisay xilligii Soomaaliya qayb weyn ka bixisay”. Madaxweynaha Somaliland wuxuu sheegay inuu hoggaamiyeyaasha dalka Kuweyt ku dhiirigeliyey inay maalgashadaan Somaliland, waxaanu yidhi “Inshallaahu waxaan rajaynaynaa inay inoo yimaadaan aniguna waxaan ku dhiirigeliyey inay dalka yimaadaan maadaama ay Kuweyt tahay dalka ugu balaadhan ee wax maalgashada dalalka Carabta. Wax fiicana waan kala kulmay, rag meesha inala joogay oo ay qiimeynayeena way jireen muqaabilada la ii sameeyey waxay ahayd mid aanan hore uga baran.”
J: Run ahaantii inagu albaab aynu iska xidhnay ma jiro, laakiin albaabkii inoo furmaba inaan galo waajib bay nagu tahay. Anigu waxaan is leeyahay furre aan noqdo. Berigii Imaaraadka Carabta waxaan la kulmay uun Sh. Xamdaan, oo isagana aad og-tihiin waxtarkiisa riiga biyaha inoo qoday, Bisha Cas ee dhawaan qaliinka indhaha fuliyey, imika wuxuu inoo soo dirayaa kooxo wadnaha qala. Kalyaha mishiinadii lagu sifeynayay ayay Hargeysa keeneen, waxaan u arkaa inay Carabtu ka waxtar badnaan doonto kuwa kale. S: Madaxweyne aqoonsi sidii aynu u heli lahayn ma kala hadashay madaxda Kuweyt? J: Horta aqoonsiga ha inoo dambeeyo, wax badan baa inooga horeeya haddii aynu dhaqaale helno aqoonsiga waa la inoo imanayaa. Haddii dhulkiina khayraad ka soo baxo oo shidaalkii aynu la soo baxno oo maalgelin lagu sameeyo waa la ina aqoonsanayaa, aqoonsigana waynu baahinaynaa. S: Rajo ma ka qabtaa in doorashadu qabsoonto 27-ka Sebtambar? J: Inshaallaahu inay 27-ka Sebtambar dhacdo ayaan anigu aaminsan yahay? S: Madaxweyne, Xisbiyada Qaranku wali islama ay meel dhigid wax heshiis ah siddee ayaad arrintaasi u aragtaa?
J: Horta, dalku sharci buu leeyahay xisbiyo tartamayaa waxba kuma heshiin karaan, dalka saddex doorasho ayaa hore uga dhacay shuruuc dalka u taala ayaa loo raacay, tanna shuruucda ayaa loo raaci doontaa. S: Madaxweyne, sidee ayaad u aragtay labadii xubnood ee Komishanka ee la doonayay in la beddelo ee aad u gudbisay Golaha Wakiilada?
Source Ramaasnews Rate this:Like this:Like Loading...
This entry was posted on June 23, 2009 at 1:23 pm	and is filed under News (Warka).